OEM - Weihai Ruiyang डुङ्गा विकास कं, लिमिटेड
रुइयाङमा दुईवटा शाखा कारखाना, चार कार्यशालाहरू, कूल क्षेत्रफल १५,००० वर्ग मिटर छ, र मुद्रण उत्पादन लाइन, ईभा उत्पादन लाइन र सामान उत्पादन लाइनले सुसज्जित छ। हाम्रो inflatable डुङ्गा को मासिक क्षमता 1000 टुक्रा छ, र यो inflatable सर्फबोर्ड को लागी 12,000 टुक्राहरु छ।
रुइयाङ लगभग २० वर्षदेखि इन्फ्लेटेबल डुङ्गाहरू, इन्फ्लेटेबल सर्फबोर्डहरू र अन्य उत्पादनहरूको डिजाइन र उत्पादनको लागि प्रतिबद्ध छ, जसले TAKACAT, VETUS, SARAY, CRAKEN र अन्य प्रसिद्ध पानी खेल उपकरणहरू सहित विश्वभरका सयौं उद्यमहरू र ग्राहकहरूलाई व्यावसायिक सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ। ब्रान्डहरू। OEM वा ODM को लागी तपाइँको विशेष आवश्यकताहरु को अनुसार, हाम्रो दस भन्दा बढी अनुभवी डिजाइनरहरु को लागी तपाइँ को लागी सबै भन्दा प्रतिस्पर्धी उत्पादनहरु दर्जी हुनेछ!
नमूनाहरूको लागि, नेतृत्व समय लगभग7दिन हो। ठूलो उत्पादनको लागि, नेतृत्व समय जम्मा भुक्तानी प्राप्त गरेपछि 30-45 दिन हो। सम्झौता वार्ता र हस्ताक्षर गरेपछि, हामीसँग तपाईंको उत्पादनहरूको लागि तपाईंको अन्तिम स्वीकृति छ। यदि हाम्रो नेतृत्व समयले तपाइँको समयसीमासँग काम गर्दैन भने, कृपया तपाइँका आवश्यकताहरू हाम्रो बिक्री प्रतिनिधिसँग पुन: सम्झौता गर्नुहोस्। सबै अवस्थामा हामी तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रयास गर्नेछौं र धेरै जसो अवस्थामा त्यसो गर्यौं।
अब परामर्श गर्नुहोस्
रुइयाङसँग पूर्ण उत्पादन-समर्थन आपूर्ति श्रृंखला छ, जसले हामीलाई मूल्यको सन्दर्भमा थप फाइदाजनक बनाउँछ। हाम्रो मूल्यहरू आपूर्ति र अन्य बजार कारकहरूको आधारमा परिवर्तन हुन सक्छ। यदि तपाईं थप जानकारीको लागि हामीलाई पुग्नुहुन्छ भने तपाईंले हाम्रो नवीनतम मूल्य सूची प्राप्त गर्नुहुनेछ।
रुइयाङद्वारा उत्पादित प्रत्येक उत्पादनले कच्चा पदार्थ, उत्पादन नियन्त्रण र तयार उत्पादन निरीक्षणको कडा निरीक्षण गर्दछ। मुख्य उत्पादनहरूले CE, TÜV र अन्य प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गरेका छन्। हामी सबै उत्पादनहरू2वर्षको लागि ग्यारेन्टी गरिएको छ भनी प्रतिज्ञा गर्छौं, र हामी तपाईंको चिन्ताहरू समाधान गर्न वारेन्टी अवधिमा बिक्री पछिको सेवालाई समर्थन गर्छौं!
पूर्ण हृदय बिक्री पछि सेवा
तपाईलाई कुनै चिन्ता नगर्नुहोस्!